Farmaajo oo eedeymo culus u jeediyay Kenya | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo eedeymo culus u jeediyay Kenya
Khudbada ayaa u muuqatay inuu Farmaajo ka akhrinayay derbiga oo horey inta loo sii duubay, ay soo jarjareen kooxda xafiiskiisa u qaabilsan warbaahinta.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha mudo-xileedkiisu dhamaaday Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa jeediyay khudbad markii uu soo baxay go'aanka ICJ ee ku saabsan kiiska badda.
Khudbadda u muuqatay inuu derbiga ka akhrinayay, oo horey loo sii duubey, lana jarjaray sida caadada ah, Farmaajo ayaa eedeymo culus ugu jeediyay hogaanka sare ee dowladda Kenya.
Wuxuu xusay in dowladda Kenya ay adeegsatay wado kasta oo ku carqaladeyn karta habsami u socodka kiiska badda ee yaallay ICJ, iyadoo dhinacyo badan dagaallo uga soo furtay.
Farmaajo ayaa sheegay in hogaanka Kenya, oo ula jeedo Uhuru uu isku dayay inuu go'doomiyo dowladiisa, isagoo xumeeyay sumacadeeda ay ku lahayd IGAD, AU iyo Beesha caalamka.
Cadaadiska Kenya ay ku haysay Soomaaliya waxaa kamid ah inay geysay Gollaha Amaanka ee QM qaraar tirsigiisu ahaa 1267, kaasoo ay ku rabtay in liiska argagaxisadda lagu daro ganacsato Soomaali ah, shaqsiyaad katirsan dowladda iyo shaqaalaha hay'adaha samafalka dalka ka shaqeeya.
Go'doominta Kenya ee dowladda Farmaajo waxaa kamid ahaa inay isku dayday in laga jaro dhaqaalaha Beesha caalamka siiyo, si ay ugu dambeyn u ogolaato inay lasoo laabato kiiska badda.
Farmaajo ayaa khudbadiisa ku sheegay in Kenya diyaaradaheeda dagaalka ay duqeymo ka fuliyeen degaanada xuduuda ku teedsan, iyagoo ku burburiyay hanti Soomaali leedahay, sida shirkadaha isgaarsiinta, kuna dishay dad iyo duunyo gudaha gobolka Gedo.
Sidoo kale, Kenya markii albaabada kasoo xirmeen, wuxuu sheegay Farmaajo inay billowday faragelin gudaha dalka ah, iyadoo afduubtay doorashadii Axmed Madoobe ee August 2019.
Uhuru ayaa Farmaajo hordhigay shuruudo badan oo ay kamid ahayd inuu la heshiisiinayo Axmed Madoobe hadii uu ogolaado in kiiska badda lagu xaliyo meel ka kaxsan Maxkamadda ICJ.
In heerkan guusha la gaaro, waxaa looga mahadecliyay Baarlamaankii 8aad dowladdii Sheekh Shariif, Xasan Sheekh oo geeyay Maxkamadda ICJ iyo Farmaajo oo ku adkaystay in kiiska lagu dhameeyo Maxkamadda, sidoo kale waxaa dadaal ka geystay qareenadii u dooday.